उच्च रक्तचाप मुटुसँग सम्बन्धित मृत्युको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण हो। अमेरिकी मेडिकल एसोसिएसनका अनुसार, सामान्य व्यक्तिको रक्तचाप १२०/८० भन्दा कम हुनुपर्छ भने १३०/८० वा सो भन्दा बढी रक्तचापलाई उच्च रक्तचापको रुपमा परिभाषित गरिएको छ। विश्वव्यापीरूपमा यसल…
चुरोटको सेवन छोड्ने योजना कसरी बनाउने ? चुरोटको सेवन छोड्ने धेरै तरिकाहरुमध्ये आफूलाई सजिलो लाग्ने एक तरिका अपनाउनु जरुरी हुन्छ । यसकोलागि समय लिएर, सोचेर एउटा योजना बनाउनु आवश्यक हुन्छ । १. चुरोटको परित्याग गर्ने कुनै एक दिन निश्चय गरी, यसको सेवन पूर्ण…
आधुनिकि करणले हाम्रो जीवनशैलीलाई दिन प्रतिदिन अस्वस्थ बनाइ रहेको छ । जीवनशैलीमा नराम्रो परिवर्तनले हामीलाई मुटु र रक्तनली सम्बन्धी रोगहरु (Cardiovascular disease, CVD) |लाग्ने सम्भावना बढाउँछ । संसारभरी मै CVD को प्रकोप बढ्दै गइरहेको देखिन्छ र यसको प्रमुख कारण अस्व…
हार्ट फेल्योरको उपचार मुख्यतः औषधिले गरिन्छ । मुटुको काममा सुधार ल्याउन विभिन्न औषधिहरुलाई योजनाबद्ध रुपले एकपछि अर्को प्रयोग गर्दै जानुपर्छ । औषधिको मात्रापनि योजना अनुसार बिरामीको अवस्था हेर्दै घटबढ गर्दै लानुपर्छ । यी औषधिहरुको साइड इफेक्ट पनि हुने भएकोले बिरामी …
मुटु कमजोर हुने धेरै कारणहरु हुन सक्छन् । व्यष्क मानिसमा देखिने कारणहरु मध्ये हृदयाघात वा कोरोनरी आर्टरी डिजिज नै प्रमुख हो । मुटुको मांसपेशीको रोग (Dilated cardiomyopathy) पनि एउटा प्रमुख कारण हो । यो रोग जुनसुकै उमेरका बिरामीमा देखा पर्नसक्छ, तर बृद्धावस्था र…
हार्ट फेल्योर (Heart Failure) भन्नाले मुटुको रगत जम्मा गर्ने वा फाल्ने (Pumping) प्रकृयामा समस्या हुनु हो । मुटुको Pumping क्षमतामा कमी भएमा रगतको प्रवाह शरीरको विभिन्न अंगहरुमा आवश्यकता अनुसार नपुगेर यसको कृयाकलापमा कमि आउँछ । हार्ट फेल्योरको कारणले बिरामीलाई दै…
वायु प्रदुषण आजको प्रमुख चुनौती हो । बढ्दो जनसंख्या, शहरीकरण तथा आधुनिकीकरण संगै वायु प्रदुषण पनि बढ्दो क्रममा रहेको पाइन्छ । हालसालै गरिएको अध्ययन अनुसार नेपालमा पनि वायु प्रदुषण बढ्दै गएको र काठमाडौंमा यसको अवस्था गम्भीर रहेको पाइन्छ । येस्तो अवस्थामा मानिहर…
के मैले औषधि खानु जरुरी छ ? शरीरको अंगहरुमा रक्तचापको असर परिसकेको छ भने, औषधि खानु अनिवार्य हुन्छ । हिजोआज प्रयोग गरिने अधिकांश औषधिहरुको खासै साइड इफेक्ट हुँदैन । औषधिको प्रयोगले उच्च रक्तचापको प्रकोपबाट महत्त्वपूर्ण अंगहरुलाई बचाउँछ । त्यसैले औषधि नखाने मानस…
अत्यधिक नुनको सेवनले रक्तचाप बढाउँछ । स्वस्थ मानिसले पनि खानामा नुन कम खानुपर्छ । नुनिलो खानेकुराहरुको प्रयोग सकेसम्म कम गर्नुपर्छ । उच्च रक्तचाप भएको बिरामीले नुनको सेवनको बारेमा अझ बढी सावधानी लिनुपर्छ । दिनहुँ एक चिया चम्चा भन्दा बढी नुन खानु हुदैन । तर नुन खा…
उच्च रक्तचापको प्रमुख कारण अस्वस्थ जीवनशैली भएकोले आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन गरेर नै रक्तचापको नियन्त्रण गर्न खोज्नुपर्छ । त्यसमध्ये पनि चुरोटको प्रयोग पूर्णरुपले बन्दगर्नु सबभन्दा राम्रो उपाय हो । यसको अतिरिक्त तौललाई नियन्त्रणमा राख्ने तथा वजन घटाउने, प्रतिदिन शारीरिक गतिव…